उपचाररत बिरामीको निधन भएपछि क्रिमसन अस्पतालमा तनाव « Himal Post | Online News Revolution
उपचाररत बिरामीको निधन भएपछि क्रिमसन अस्पतालमा तनाव
प्रकाशित मिति : २०७३, १९ फाल्गुन १५:११
बुटवल, १९ फागुन ।
उपचाररत बिरामीको निधन भएपछि रुपन्देहीको मणिग्राम स्थित क्रिमसन अस्पतालमा तनाव सिर्जना भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. २२ मुडियारीका ४५ वर्षीय बुद्धिराम थारुको उपचारका क्रममा बिहीबार बिहान तीन बजे निधन भएपछि मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै औषधी उपचारमा लागेको खर्च मिनाहाको माग गरेका छन् ।
अस्पतालमा तनाव सिर्जना भएपछि अस्पताल परिसरमा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । बिरामीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त पनि अस्पतालमा जम्मा भएका छन् । असहज परिस्थितीलाई मध्येनजर गरेर अस्पतालमा प्रहरी तैनाथ गरिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय मंगलापुरका प्रमुख प्रहरी सहायक निरिक्षक गिरिराज अर्यालले बताउनु भयो ।
तर अस्पताल प्रशासनले भने जवरजस्ती नभई बिरामीको अवस्थालाई हरेर आफन्तको सल्लाहमा नै शल्यक्रिया गरिएको बताएको छ । बिरामीलाई पहिले औषधीकै माध्यमबाट सुधार गर्न खोजीएपनि अवस्था क्रिटिकल बन्दै गएपछि अस्पताले यहि फागुनको ९ गने शल्यक्रिया गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. शेखरप्रसाद पोखरेलले बताउनु भयो । ‘हामीले पहिले नै भनेका थियौं, ब्रेन हेमरेज भएको बिरामीलाई जतिसुकै बेला क्रिटिकल अवस्था आउन सक्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘बिरामीलाई भएको त्यहिनै हो ।’
त्यसपछि आफन्तले बिरामीलाई काठमाण्डौ न्यूरोमा पु¥याएका थिए । न्यूरोमा पनि बिरामीलाई अस्पतालले लापरवाही गरेको बताएको र अवको उपचारबाट बिरामीलाई बचाउन नसकिने भन्दै फिर्ता पठाएको आफन्त थारुले बताउनु भयो । त्यसपछि बिरामीलाई आफन्तले पुन क्रिमसन ल्याएर उपचार सुरु गरेका थिए । यद्यपी बिरामीको बिहिबार बिहान निधन भयो । उपचार गरेर बिरामीलाई बचाउन पनि नसकिएको र सम्पत्ति पनि सकिएको बताउँदै डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यू भएकाले अस्पतालले उपचारमा लागेको सबै खर्च मिनाहा गर्नुपर्ने आफन्तको माग छ । अस्पताले भने दोस्रो पटक ल्याएर उपचार गरेपछि लागेको खर्च मिनाहा गरिएको र सबै खर्च मिनाहा गर्न नसकिने निर्देशक डा. पोखरेलले बताउनु भयो ।